ဆေးလိပ်​နဲ့​ကျန်းမာ​ရေး | J-Myanmar
သူငယ်ချင်း​တို့​ရေ…ဆေးလိပ်​တ​လိပ်​သောက်​ရင် အသက်​၁​၄​မိ​နစ် တို​တယ်.ဘဝ​မှာ​တချို့​က​ဆေးလိပ်​သောက်​ခဲ့​မိ​ပါ​လိမ့်​မယ်….ဒါ​ဆို.ဆေးလိပ်​ဘယ်​လို​ဖြတ်​မ​လဲ..??
ယနေ့​လူ​ငယ်​တွေ​အတွက် အဓိက​ဖြတ်​ရ​မဲ့​အရာ​ပါ။ဆေးလိပ်​နဲ့​ကျန်းမာ​ရေး​ကြိုက်​ရာ​ရွှေး​ဆို​တာ​ကို​သိ​နေ​ပေ​မဲ့…မ​ဖြတ်​နိုင်​သေး​ပါ​ဘူး…. သူငယ်ချင်း​တို့​အချင်းချင်း​ဖြတ်​နိုင်​အောင်​ကူညီ​ပေး​ကြ​ပါ။ ။။မိတ်ဆွေ​တို့​ထဲ​မှာ​လည်း​ဆေးလိပ်​သောက်​သူ​တွေ​ပါ⁠ပါ​လိမ့်​မယ်..ဒီ​နေ့​က​စ​ဖြတ်​ကြ​ပါ​စို့​ဗျာ…..
Psoriasis ခေါ်​တဲ့ အရေ​ပြား​ရောဂါ ။
Cataracts ခေါ်​တဲ့ မျက်စိ တိမ်​စွဲ​ရောဂါ
Wrinkling ခေါ်​တဲ့ အသားအရေ ရှုံ့တွ အိုမင်း​ခြင်း ။ (ဒါ​ကြောင့်​ဆေးလိပ်​သောက်​သူ​တွေ ရုပ်​ရည်​ဟာ မ​သောက်​သူ နဲ့​ယှဉ်​လိုက်​ရင် ပို​ပြီး အိုစာ​နာ​ကျ ပုံ ဖြစ်​နေ​ရ​တာ​ပါ ။)
Hearing Loss ခေါ်​တဲ့ နား အကြား​အာရုံ ချို့တဲ့​ခြင်း​ရောဂါ ။
Cancer ခေါ်​တဲ့ ကင်​ဆာ အမျိုး​မျိုး –
ဥပမာ အဆုပ်။နှာခေါင်း​လည်ချောင်း ၊လေပြွန်၊အသံ​အိုး ၊ခံတွင်း​ကင်​ဆာ၊အစာ​မြို​ပြွန် ၊ အူ၊ ရင်သား ကင်​ဆာ ၊ကျောက်ကပ် ၊ ဆီး​အိတ် နှင့် အချို့​သော​လူ​ကီး​မီး​ယား​သွေး​ကင်​ဆာ​များ ။ ဆေးလိပ်​ထဲ​မှာ Carcinogen လို့ခေါ်​တဲ့ ကင်​ဆာ ဖြစ်​စေ​တတ်​သော ဓါတ်​ပေါင်း ၄​၃ မျိုး​မျှ ပါဝင်​ပြီး ကင်​ဆာ​ကြောင့် သေ​ဆုံး​ရ​ခြင်း​ရဲ့ ၃​၀ % ဟာ ဆေးလိပ်​ကြောင့် ပါ​တဲ့ ။
Tooth decay ခေါ်​တဲ့ သွား​ပိုး​စား သွား​ပုပ် ရောဂါ ။ခံတွင်း အနံ့ အသက်​လည်း ဆိုးရွား​စေ​ပါ​တယ် ။
Emphysema ခေါ်​တဲ့ အဆုပ်​လေ​အိပ်​များ​တွင်​လေခို​ပြီး ပွ​ပျက်​သော​ရောဂါ ။( ဒါ​ကြောင့် အသက်​ရှု​ရ​တာ ကြပ်​တယ် ။ မော​တယ်​ပေါ့ )
Osteoporosis ခေါ်​တဲ့ အရိုး​ပွ အရိုး​ပါး ပြီး အရိုးကျိုး​လွယ်​စေသော​ရောဂါ ။
Heart disease ခေါ် နှလုံး​နှင့်​သွေး​ကျော ရောဂါ​များ ။ဆေးလိပ်​ထဲ​မှာ​ပါဝင်​တဲ့ နီ​ကို​တင်း​ဓါတ်​ဟာ ဦးနှောက်​ထဲ​မှ ဒို​ပါ​မင်း​ဓါတ်​တ​မျိုး​ကို​များ​စေ​ပြီး အဒီ​န​လင်( adrenaline)ကို​ပါ​များ​စေ​တဲ့​အတွက် နှလုံးခုန်​ခြင်း​မြန်​စေ​တယ်၊ သွေးတိုး​စေ​တယ်​ပေါ့ ။
Stomach ulcer ။ ဆေးလိပ်​ကြောင့် အစာအိမ်​မှာ အစာ​ခြေ​ရည် အက်​စစ်​ဓါတ်​ထွက်​နှုန်း ပို များပြား​စေ​ပြီး အစာအိမ် အနာပေါက်​ဖို့​လွယ်ကူ​စေ​ပါ
Discolored fingers ။ ဆေးလိပ်​မှာ​ပါ​တဲ့ တာခေါ်​တဲ့ ကတ္တ​ရာ​ဓါတ်​ဟာ ဆေးလိပ်​ကိုင်​သောက်​တဲ့​လက်​မှာ အရောင်​စွဲ ပြီး ပြောင်းလဲ​စေ​တတ်​ပါ​တယ် ။
Cervical cancer and miscarriage ။ အမျိုးသမီး​များ​မှာ သားအိမ်​ခေါင်း​ကင်​ဆာ နဲ့ သားလျှော​သား​ပျက်​ခြင်း​များ​ဖြစ်​စေ​နိုင်​ပါ​တယ် ။
Deformed sperm ။ အမျိုးသား​များ​မှာ​ရှိ​တဲ့ သုတ်​ပိုး အရည်​အတွက်​လျော့​နဲ​စေ​ခြင်း၊ပုံ​သဏ္ဍန်​ပြောင်းလဲ​ခြင်း၊ DNA ပျက်စီး​မှု စ​သ​ဖြင့်​လည်း ဆိုး​ကျိုး​ရ​စေ​နိုင်​ပါ​တယ် ။
Buerger’s Disease ။ ဆေးလိပ်​သောက်​ခြင်း​ကြောင့် သွေးကြော​ငယ်​များ ကျဉ်း​စေ ပိတ်​စေ​ပြီး ခြေ ၊လက်​တွေ​သို့​သွေး​လျှောက်​လှည့်ပတ်​ခြင်း​ကို ထိခိုက်​စေ​၍ နောက်ဆုံး​တွင် သွေးကြော​ပိတ် ပြီး ခြေချောင်း လက်ချောင်း​များ ထိပ်​မှ​စ​ပြီး ပုတ်​ကာ အရောင်​မဲ သွား​တတ်​ပါ​တယ် ။အဲ​ဒီ​အခါ​မှာ အလွန် နာကျင်​မှု​ဝေဒနာ​ကို ခံစား​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပြီး ခွဲ​စိပ်​ဖြတ်​ထုတ်​ရ​လောက်​တဲ့ အထိ​ဖြစ်​တတ်​ပါ​တယ်။
တချို့​က ယူဆ​နေ​ကြ​တာ တာ လို့ခေါ်​တဲ့ ကတ္တ​ရာ​ဓါတ်​နဲ့ နီ​ကို​တင်း​ပါဝင်​မှု​နဲ​တဲ့ ဆေးလိပ်​ကို ရွေးချယ်​သောက်​ရင် ဘာ​မှ အန ၱ​ရာယ် မ​ဖြစ်​နိူင်​ဘူး လို့ ထင်​နေ​ကြ​တာ ဟာ မှားယွင်း ပါ​တယ်​တဲ့ ။
ကျန်းမာ​ရေး​လည်း​ထိခိုက် ၊ ငွေ​ကုန်​ကျေး​ကျ​လည်း များ​စေ​တဲ့ ဒီ​ဆေးလိပ်​ကို သောက်​သုံး​နေ​သူ​များ ဆေးလိပ်​ဖြတ်​နိုင်​ကြ​ပါ​စေ ။
Next post ရင်ဘတ်​အောင့်​ရ​ခြင်း
Previous post နိုင်ငံ​ရေး ရန်​ပုံငွေ အလွဲ​သုံး​စား​ပြု​မှု​ဖြင့် ဂျပန်​ဝန်ကြီး​တစ်​ဦး ရာထူး​မှ နုတ်​ထွက်​ရ